नयाँ नेतृत्व चयनका लागि एमालेको पदाधिकारीतर्फ कसको मत कति ? – Kantipur Hotline
काठमाडौँ आषाढ ३१, एमाले नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना आज तेस्रो दिन पनि जारी छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा अहिले बिहान मतगणनालाई निरन्तरता दिने तयारी हुँदै गरेको सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ । सोमवार साँझ पदाधिकारीको गणना स्थगित गरेर केन्द्रीय सदस्यको मात्र गणना मात्र अघि बढाइएको थिये । सोमवार साँझसम्मम पदाधिकारीको मतगणना तर्फ अध्यक्षका प्रत्याशी माधवकुमार नेपालले ६४० केपी शर्मा ओलीले ५९३ मत प्राप्त गरेको बुझिएको छ । त्यस्तै आज साँझसम्म पूर्ण मत परिणाम दिने गरी गणना सुरु गर्ने तयारीमा निर्वाचन समिति ले तयारी थालेको बुझिएको छ ।
अहिलेसम्म भएको मतगणनामा पदाधिकारीतर्फ कसको मत कति ?
अध्यक्षका प्रत्याशी माधवकुमार नेपालको ६४० मत र त्यस्तै गरि केपी शर्मा ओलीले ५९३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । त्यस्तै गरी महासचिवमा पनि नेपाल प्यानलका सुरेन्द्र पाण्डे ओली प्यानलका ईश्वर पोखरेलभन्दा अगडि रहेको छ ।
माधवकुमार नेपाल- —-६४०—–केपी शर्मा ओली -५९३
भीम रावल- ६८९ वामदेव गौतम- ६३६
युवराज ज्ञवाली- ६८६ विद्या भण्डारी -६२०
अष्टलक्ष्मी शाक्य-६७३ प्रदीप नेपाल ५६०
लालबाबु पण्डित-६६३ धर्मनाथप्रसाद साह-५४०
राजेन्द्र पाण्डे-६६३ किरण गुरुङ९५७२
सुरेन्द्र पाण्डे- ६६२————–ईश्वर पोखरेल-५८६
रघुजी पन्त-६३२—————-विष्णु पौडेल९६१९
घनश्याम भुसाल-६९४———–शंकर पोखरेल९५९१
गोकर्ण विष्ट-७७६ प्रदीप ज्ञवाली-६४२
योगेश भट्टराई९६८७ ———-विष्णु रिमाल९५७२
वेदुराम भुसाल-६२९ ———–पृथ्वी सुब्बा गुरुङ-५८२
पर्शु मेघी गुरुङ-६६२———— रघुवीर महासेठ-६२९
भीम आचार्य-६६३————– केशवलाल श्रेष्ठ-५१०
पदाधिकारीको मतगणनामा फेरि रोकियो, पदाधिकारीतर्फ ९६७ मत गणना हुन बाँकी